Shangyi – Shangyimm
Posted on November 16, 2021 by Shangyi
(၁) ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ချပေးနိုင်ခြင်း။
(၅)သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်း။
(၆) ကင်ဆာရောဂါကို မဖြစ်ပွားနိုင်အောင် တားဆီးပေးနိုင်ခြင်း။
ဒါကြောင့် ထောပတ်သီး ဖျော်ရည်ကို သောက်ဖို့တော့လိုပြီနော်။
ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေသာက္သုံးျခင္းမွ ရရွိႏိုင္တဲ့ အံ့မခန္းေကာင္းက်ိဳးမ်ား
(၁) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း။
(၅)ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္ျခင္း။
(၆) ကင္ဆာေရာဂါကို မျဖစ္ပြားႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္း။
ဒါေၾကာင့္ ေထာပတ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ကို ေသာက္ဖို႔ေတာ့လိုၿပီေနာ္။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ထောပတ်သီးဖျော်ရည်သောက်သုံးခြင်းမှ ရရှိနိုင်တဲ့ အံ့မခန်းကောင်းကျိုးများ
Posted on November 10, 2021 by Shangyi
ဆံပင်တွေဆီကိုပို့ပေးတာပါအာ့တော့မှဆံပင်တွေကလိုအပ်တဲ့အာဟာရ အောက်ဆီဂျင်တွေရပြီး ကောင်းစွာရှင်သန်ကြီးထွားကြတာပါ
ဆံပင္ေတြဆီကိုပို႔ေပးတာပါအာ့ေတာ့မွဆံပင္ေတြကလိုအပ္တဲ့အာဟာရ ေအာက္ဆီဂ်င္ေတြရၿပီး ေကာင္းစြာရွင္သန္ႀကီးထြားၾကတာပါ
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်သွေးအားနည်းခြင်း ဆက်စပ်မှုရှိသလား
Posted on November 4, 2021 November 4, 2021 by Shangyi
ပဲပုပ်၃ချပ်(မီးကင်ထားပါ)ကိုင်းခရမ်းချဉ်သီး၂ လုံး(ပြု တ်လဲရ၊မီးကင်လဲရ၊မီးကင်တော့ပိုမွှေးကြက်သွန်ဖြူ ၁ဥ
ငရုတ်အပုတောင့်၂တောင့်ကြော်ထားပါငရုတ်သီး စိမ်း ၃တောင့်မီးကင်ထားပါ အရင်ဆုံးငရုတ်သီးကြော်လေးထည့်ထောင်းပါ
ပဲပုပ္၃ခ်ပ္(မီးကင္ထားပါ)ကိုင္းခရမ္းခ်ဥ္သီး၂ လုံး(ျပဳ တ္လဲရ၊မီးကင္လဲရ၊မီးကင္ေတာ့ပိုေမႊးၾကက္သြန္ျဖဴ ၁ဥ
င႐ုတ္အပုေတာင့္၂ေတာင့္ေၾကာ္ထားပါင႐ုတ္သီး စိမ္း ၃ေတာင့္မီးကင္ထားပါ အရင္ဆုံးင႐ုတ္သီးေၾကာ္ေလးထည့္ေထာင္းပါ
Posted in ဗဟုတုသ LeaveaComment on ရှမ်းပဲပုပ် ထောင်းနည်း
ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးရှိပုံ
🇶 ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးရှိပုံတွေကို ရှင်းပြပေးပါ။
🇦 ဆီးချိုရောဂါအမှတ်-၂ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းခြင်းဟာ နံပါတ် (၁) နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ် လမ်းလျှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရင် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားမယ့် အလားအလာကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေသူတွေ အနေနဲ့လည်း ဆေးတွေပဲ ထိုင်သောက်နေလို့ကတော့ ဆီးချိုထိန်းချုပ်ရဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ ဆေးလည်းသောက် လမ်းလည်းလျှောက်ခဲ့ရင် အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းရဲ့ စွမ်းရည် (Insulin sensitivity) ပိုကောင်းလာလို့ သောက်ရတဲ့ဆေးပမာဏကိုလည်း လျော့နည်းစေတဲ့အပြင် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ နှလုံးနဲ့သွေးကြောရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါရှိသူတိုင်း နေ့စဉ်မပျက်မကွက် လမ်းလျှောက်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
🇶 ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ကာကြယ္ကုသေရးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးရွိပုံေတြကို ရွင္းျပေပးပါ။
🇦 ဆီးခ်ိဳေရာဂါအမွတ္-၂ ျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းျခင္းဟာ နံပါတ္ (၁) ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားမယ့္ အလားအလာကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ေနသူေတြ အေနနဲ႔လည္း ေဆးေတြပဲ ထိုင္ေသာက္ေနလို႔ကေတာ့ ဆီးခ်ိဳထိန္းခ်ဳပ္ရဖို႔ သိပ္မလြယ္ပါဘူး။ ေဆးလည္းေသာက္ လမ္းလည္းေလွ်ာက္ခဲ့ရင္ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းရဲ႕ စြမ္းရည္ (Insulin sensitivity) ပိုေကာင္းလာလို႔ ေသာက္ရတဲ့ေဆးပမာဏကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ ႏွလုံးနဲ႔ေသြးေၾကာေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါေတြကေန ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူတိုင္း ေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ လမ္းေလွ်ာက္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။
Posted in သတင္း LeaveaComment on ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးရှိပုံ
မိန်းမ မတက်ရတဲ့ ဘုရားများဆိုတာ
Posted on November 3, 2021 November 3, 2021 by Shangyi
မက္ကဆီကို နိုင်ငံဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ခရစ်ယာန်များတဲ့ နိုင်ငံ။ အဲဒီ မက္ကဆီကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်စ လူ (၃၀) လောက် မြန်မာပြည် ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မန္တလေးက မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဝင်ဖူးပြီးတော့ စစ်ကိုင်း ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာပြီး ပါချုပ်ဆရာတော် ကျောင်း ရောက်လာပြီးတော့ ကျောင်းစောင့်တွေကို ခွင့်တောင်းတယ်။ “ဆရာတော်နဲ့တွေ့တုန်း မေးစရာရှိတာလေး မေးချင်ပါတယ်” တဲ့။
ဆိုတော့ အခုလည်း မက္ကဆီကန်က အသစ်စက်စက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ခါစ နိုင်ငံခြားသူ က မကျေနပ် ဘူး။ သူတို့ နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေက အင်မတန် စူးစမ်းကြတာလေ။ တစ်ခုခု ဆိုရင် တိကျတဲ့ အဖြေမရ မချင်း ဇွတ်ကို မေးနေမှာ။ ခုလဲ ဒီကိစ္စကို မရဘူး။ သူလက်မခံဘူးပေါ့။ သူက ယောက်ျားရှေ့က နေချင်တာ။ အဲ့တော့ ယောက်ျားတွေချည်း တစွက်စွက် ဝင်သွားပြီး မိန်းမသားတွေ မဝင်ရဘူး ဆိုတော့ ဒါက မိန်းမသားတွေကို ဘာသာရေးမှာ သက်သက် နှိမ်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ထင်ကြောင်း ပါချုပ် ဆရာတော်ကို လျှောက်တယ်။
Tour Guide လုပ်တဲ့ လူတွေကိုလည်း ပါချုပ်ဆရာတော်ဟာ တဆက်ထဲမှာလိုက်တယ်။ “မင်းတို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ လျှောက်မပြောနဲ့။ Guide လုပ်တဲ့လူကို အဲဒီလိုမေးလိုက်လို့ Guide ဖြစ်တဲ့လူက အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာ ဘုရားရှေ့မှာ မတော်လို့လို့၊ ထမီတွေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ ဆိုပြီး အဲဒီလိုတွေ မပြောနဲ့တဲ့။ သူတို့ဆီမှာ ထမီ ခေါင်းပေါင်းပြီး ရေချိုးတဲ့ ယောက်ျား တောင် ရှိသေးတယ်တဲ့” ဆရာတော်က မိန့်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ် မှန်သမျှ လုပ် ကောင်းတယ်။ အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ မလုပ်ကောင်းဘူး။ ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်တယ်။
မိန္းမ မတက္ရတဲ့ ဘုရားမ်ားဆိုတာ
မကၠဆီကို ႏိုင္ငံဆိုတာ အားလုံးသိၾကတဲ့ အတိုင္းပဲ ခရစ္ယာန္မ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံ။ အဲဒီ မကၠဆီကိုက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္စ လူ (၃၀) ေလာက္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ မႏၲေလးက မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး ဝင္ဖူးၿပီးေတာ့ စစ္ကိုင္း ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာၿပီး ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေက်ာင္း ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေစာင့္ေတြကို ခြင့္ေတာင္းတယ္။ “ဆရာေတာ္နဲ႔ေတြ႕တုန္း ေမးစရာရွိတာေလး ေမးခ်င္ပါတယ္” တဲ့။
ဒါနဲ႔ ဆရာေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြကေတြ႕တဲ့အခါ မကၠဆီကန္သူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္က ဘာေမးတုန္း ဆိုရင္ “ဘုရားႀကီး ဝင္ၿပီး ဖူးတဲ့အခါမွာ (အမ်ိဳးသမီးမဝင္ရ) ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ ေတြ႕လာ တယ္တဲ့။ ဗုဒၶဘာသာက အဲဒီလို ခြဲျခား ဆက္ဆံ သလား” တဲ့။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆိုပါ ဆိုင္းပုဒ္နဲ႔ စည္းကမ္းေလး ေတြ ေတြ႕ဖူးၾကမွာပါ။ ဥပမာ – ေ႐ႊတိဂုံဘုရားရဲ႕ အလယ္ပစၥယံ မွာဆိုရင္ “အမ်ိဳးသမီး မတက္ရ” ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ ထားတာ ရွိတယ္။ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ဘုရားမွာ က်ေတာ့လဲ “တံတားကို အမ်ိဳးသမီး မကူးရ” ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိပ္မသိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ ဧည့္လမ္းၫႊန္ Tour Guide ေတြ ခဏခဏ ျပႆနာတက္တတ္ ၾကတယ္။
ဆိုေတာ့ အခုလည္း မကၠဆီကန္က အသစ္စက္စက္ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ခါစ ႏိုင္ငံျခားသူ က မေက်နပ္ ဘူး။ သူတို႔ ႏိုင္ငံျခားက လာတဲ့ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြက အင္မတန္ စူးစမ္းၾကတာေလ။ တစ္ခုခု ဆိုရင္ တိက်တဲ့ အေျဖမရ မခ်င္း ဇြတ္ကို ေမးေနမွာ။ ခုလဲ ဒီကိစၥကို မရဘူး။ သူလက္မခံဘူးေပါ့။ သူက ေယာက္်ားေရွ႕က ေနခ်င္တာ။ အဲ့ေတာ့ ေယာက္်ားေတြခ်ည္း တစြက္စြက္ ဝင္သြားၿပီး မိန္းမသားေတြ မဝင္ရဘူး ဆိုေတာ့ ဒါက မိန္းမသားေတြကို ဘာသာေရးမွာ သက္သက္ ႏွိမ္တယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေၾကာင္း ပါခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ကို ေလွ်ာက္တယ္။
ပါခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ က ဘာျပန္မိန႔္သလဲဆိုေတာ့ – “This is not Buddhism. This isatradition.” ဒါ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔။ ဒါဟာ “tradition” ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ထုံးစံ ေခၚတယ္လို႔ ေျပာေတာ့မွ ေက်နပ္ သြားတယ္။
Tour Guide လုပ္တဲ့ လူေတြကိုလည္း ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဟာ တဆက္ထဲမွာလိုက္တယ္။ “မင္းတို႔ ရွည္ရွည္ေဝးေဝးေတြ ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔။ Guide လုပ္တဲ့လူကို အဲဒီလိုေမးလိုက္လို႔ Guide ျဖစ္တဲ့လူက အေယာင္ေယာင္အမွားမွားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဆိုတာ ဘုရားေရွ႕မွာ မေတာ္လို႔လို႔၊ ထမီေတြနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ညာျဖစ္လို႔ ဆိုၿပီး အဲဒီလိုေတြ မေျပာနဲ႔တဲ့။ သူတို႔ဆီမွာ ထမီ ေခါင္းေပါင္းၿပီး ေရခ်ိဳးတဲ့ ေယာက္်ား ေတာင္ ရွိေသးတယ္တဲ့” ဆရာေတာ္က မိန႔္တယ္။
ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္က – “သီဟိုဠ္မွာဆိုရင္ သူတလွည့္ ကိုယ္တလွည့္ ဝတ္ေနတာ။ ထမီရယ္ လုံခ်ည္ရယ္ ရွိတာ မဟုတ္ပဲ။ ဘာမွ မထူးဘူး။ ေခါင္းအုံးေပၚလဲ ေျခေထာက္ တင္တာပဲ အဲဒီလူေတြ။ အဲဒီေတာ့ ေျခေထာက္က နိမ့္က်ၿပီး ေခါင္းက ျမတ္တယ္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေျပာလို႔ ရမွာလဲ။ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးဟာ တူတူပဲေပါ့။
သို႔ေသာ္ ဗမာေတြ အယူအဆေနာ္။ ေခါင္းရင္းဆိုရင္ အမြန္အျမတ္ ထားတယ္ေလ။ ေခါင္းရင္းကို ေျခေထာက္ထားရင္ အလြန္စိတ္ဆိုးမယ္။ ဒါက tradition ပဲေပါ့။ ေခါင္းမကိုင္နဲ႔ ေခါင္းကိုင္ရင္ မႀကိဳက္ ဘူး။ ထိုင္းေလးေတြဆိုရင္ ေခါင္းသြားကိုင္ရင္ ရန္သူပဲ။ အဲဒါ သီဟိုဠ္ေတြက ဘာရယ္ မဟုတ္ဘူး။ လူကို ခ်စ္လို႔ရွိရင္ ေခါင္းကိုင္တယ္။
အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး tradition ေတြက မတူဘူး။ ၿပီးေတာ့ သီဟိုဠ္တို႔ Chinese တို႔က တစ္ခုခုျပရင္ လက္နဲ႔ မျပဘူး။ ေျခေထာက္နဲ႔ ျပတယ္။ (ဗမာက်ေတာ့ ဒါ အင္မတန္႐ိုင္းတယ္) ဒါ သူတို႔ tradition ပဲလို႔ ကိုယ္က နားလည္လို႔ရွိရင္ ျပႆနာ မျဖစ္ဘူး။ “ဟာ ဒီေကာင္ ႐ိုင္းလွခ်ည္လား” ဆို ရန္ျဖစ္ၾက။ သူကလဲ ဘာ႐ိုင္းမွန္း မသိဘူး။ ႐ိုင္းလွခ်ည္လားဆို သူ႔ကိုယ္သူလဲ ဘာ႐ိုင္းမွန္းမွ မသိတာ။ သူ လုပ္ေနက်ပဲ ေျခေထာက္နဲ႔ ျပတယ္ေလ။ ဒါ သူ႔ ေျခေထာက္ အားလို႔ ေျခေထာက္နဲ႔ ျပတာေပါ့။ ကိုယ္အားတာ ကိုယ္လုပ္တာ။ လက္နဲ႔ ေျခေထာက္ တူတူပိုင္တာပဲ။
သို႔ေသာ္ tradition အရ ဒါေတြ ႐ိုင္းစိုင္းတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ယဥ္ေက်းတယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။အဲဒီလို ယူဆတာ။
သီဟိုဠ္ကြၽန္း သြားၾကည့္ရင္ တရားနာၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဒူးတုပ္ၿပီး မထိုင္ႏိုင္ဘူး။ ဘာလုပ္တုန္း။ ဘုန္းႀကီးဘက္ ေျခေထာက္ေလးေတြ ဆင္းၿပီး ထိုင္ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက ဒူးေထာင္ေပါင္ကား ထိုင္ၾကတယ္။ အဲေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြထိုင္တာ ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ ဘုန္းႀကီး ဘက္ကို ေျခဆင္းထိုင္ၾကတယ္။ လက္အုပ္ေတာ့ ခ်ီထားတယ္။ ေျခစုံလက္စုံမိုးတယ္ ဆိုတာ အဲဒါ ေခၚတာ။ ဒါ ဗုဒၶဂယာ သြားတဲ့လူေတြ သီဟိုဠ္အဖြဲ႕ ဘုရားဖူးလာတယ္ဆိုရင္ ေတြ႕လိမ့္မယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ေတြ႕ရတတ္တာပဲေနာ္။ ေျခစုံလက္စုံမိုး ဒါ သူတို႔ tradition ပဲ။ သြားေျပာလို႔ မရဘူးေလ။
သူတို႔မွာ ေျခေထာက္ကို ယုတ္ညံ့တယ္လို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ ဗမာကေတာ့ ေျခေထာက္ကို အလြန္ ယုတ္ညံ့တယ္။ ယုတ္ညံ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူႀကီး၊ သူႀကီးေရွ႕ဆိုရင္ ေျခေထာက္ေဖာ္ မထိုင္ရဘူး။ ေနာက္ပစ္ထားရတယ္ေနာ္။ သူတို႔က်ေတာ့ ေျခေထာက္နဲ႔ ေခါင္း တူတူပဲ။ ဘာမွ မထူးဘူး။
ေအး ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆုံးအမ အမွန္ေတြဟာ ဒီ tradition ေတြကေန ခြဲထြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ tradition ေတြကေန ခြဲမထြက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဗုဒၶရဲ႕ အဆုံးအမလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ ေရာေထြး ဝင္ေရာက္ ေနတာ။ ဗုဒၶရဲ႕ အဆုံးအမ အစစ္က ခုနက ေျပာတဲ့ အတိုင္းပဲ။
ဘယ္အခ်ိန္လုပ္လုပ္ ေကာင္းတာ လုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့ နကၡတ္ပဲ။ ေကာင္းကင္က ၾကယ္ေတြက ကိုယ့္ ကိုဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ေတြက ကိုယ့္ကို ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ပဲ နားလည္ရမယ္။ အကုသိုလ္ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ကုသိုလ္ ျဖစ္ ေအာင္ သတိေဆာင္ရမယ္။ ဒါ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆုံးအမ အေျခခံပဲ။
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆုံးအမကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကုသိုလ္ျဖစ္တဲ့အလုပ္ မွန္သမွ် လုပ္ ေကာင္းတယ္။ အကုသိုလ္ျဖစ္တဲ့ အလုပ္မွန္သမွ် မလုပ္ေကာင္းဘူး။ ဒီလိုပဲ သတ္မွတ္တယ္။”
Posted in ဗဟုတုသ LeaveaComment on မိန်းမ မတက်ရတဲ့ ဘုရားများဆိုတာ
ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံဖု မပေါက်ဖူးတဲ့သူမရှိပါဘူး ပေါက်ဖူးတဲ့ သူတွေပါပဲ။
စိုးရိမ်စရာ ရောဂါအနာ မဟုတ်ပေမယ့် မျက်နာပေါ်မှာ အပေါက်များတဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်လို့ အလှပျက်၊ မျက်နာပြရခက်ပါတယ်။
ငါးရက်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလိမ်ဆေး လိမ်းကြည့်ပါ။ ဆေးဖော်ဖို့ကလည်း အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။
ကြက်သွန်နီဥသေးတစ်လုံးကို အခွံနွာပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ။
ပြီးရင် ကြွေပုဂံလုံးထဲ ထည့်ပြီး သံပရာသီးတစ်လုံးကို အရည်ညစ်ချလို့ ရောဖျော်ပါ။
သင့်ရဲ့ပွေးကွက်၊ ညှင်းကွက်၊ တင်းတိတ်ကွက်၊ ဝက်ခြံဖုကို လိမ်းပေးပါ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လိမ်းပေးပါ။
ညပိုင်းမှာ မျက်နာကို ရေနွေးနဲ့သန့်စင်ပြီး သနပ်ခါးအမြစ်လိမ်းပြီး အိပ်ပါ။
ငါးရက်လောက် ဆက်တိုက်လုပ်ရင် သင့်မျက်နာဟာ ကြည်လင်ရှင်းသန့်ပြီး ကျက်သရေရှိစွာ လှပနေပါလိမ့်မယ်။
ငါးရက္အတြင္း ေပြး၊ညႇင္း၊တင္းတိတ္၊ဝက္ၿခံ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့နည္း
ေပြး၊ ညႇင္း၊ တင္းတိတ္၊ ဝက္ၿခံဖု မေပါက္ဖူးတဲ့သူမရွိပါဘူး ေပါက္ဖူးတဲ့ သူေတြပါပဲ။
စိုးရိမ္စရာ ေရာဂါအနာ မဟုတ္ေပမယ့္ မ်က္နာေပၚမွာ အေပါက္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္လို႔ အလွပ်က္၊ မ်က္နာျပရခက္ပါတယ္။
ငါးရက္အတြင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာလိမ္ေဆး လိမ္းၾကည့္ပါ။ ေဆးေဖာ္ဖို႔ကလည္း အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။
ၾကက္သြန္နီဥေသးတစ္လုံးကို အခြံႏြာၿပီး ညက္ေအာင္ေထာင္းပါ။
ၿပီးရင္ ေႂကြပုဂံလုံးထဲ ထည့္ၿပီး သံပရာသီးတစ္လုံးကို အရည္ညစ္ခ်လို႔ ေရာေဖ်ာ္ပါ။
သင့္ရဲ႕ေပြးကြက္၊ ညႇင္းကြက္၊ တင္းတိတ္ကြက္၊ ဝက္ၿခံဖုကို လိမ္းေပးပါ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္လိမ္းေပးပါ။
ညပိုင္းမွာ မ်က္နာကို ေရေႏြးနဲ႔သန႔္စင္ၿပီး သနပ္ခါးအျမစ္လိမ္းၿပီး အိပ္ပါ။
ငါးရက္ေလာက္ ဆက္တိုက္လုပ္ရင္ သင့္မ်က္နာဟာ ၾကည္လင္ရွင္းသန႔္ၿပီး က်က္သေရရွိစြာ လွပေနပါလိမ့္မယ္။
Credit : ဓမၼစကူးလ္ဆုံရာ
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ငါးရက်အတွင်း ပွေး၊ညှင်း၊တင်းတိတ်၊ဝက်ခြံ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း
Bone injuries အရိုးထိခိုက်ခြင်း ရှေးဦးသူနာပြု
Posted on October 21, 2021 October 21, 2021 by Shangyi
၁။ ကျိုးသည့်နေရာသည် ပိတ်နေခြင်း
၂။ ကျိုးသည့်နေရာသည် အပြင်သို့ ပွင့်နေခြင်း
၃။ ကျိုးရုံသာမက အခြားဒဏ်ရာများ ပါနေခြင်း
၄။ ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော သစ်စိမ်းချိုးကျိုးခြင်း
3. အသက်ရှူမှု စစ်ဆေးပါ
4. လူနာကို နှစ်သိမ့်ပါ
5. တခြားဒဏ်ရာ ရှိ-မရှိစစ်ဆေးပါ
6. ကျိုးသည့်အပိုင်းကို မလှုပ်ရှားအောင်လုပ်ပါ
9. ခြေထောက်-လက် ကျိုးလျှင် ဆန့်ဆွဲမပေးရ
10. အထိန်းမပါဘဲ မရွှေ့ရ
11. အစားအစာ မပေးသေးပါနှင့်မေ့ဆေးပေးပြီးကုရလျင် အစားမရှိမှ ကောင်းသည်။
အရိုးကျိုးခြင်းနှင့်အတူ အနာ၊ အပေါက် ဖြစ်ခြင်း အရိုးကို မြင်နေရခြင်း၊ ကျည်ဆံ၊ ဗုံးဆံ ဝင်နေခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင် တတ်၍ ဂရုစိုက် ကုသရမည်။
အရိုးကျိုးလျှင် အရိုးကျိုးသည့်နေရာက အရိုး၏ အချွန်များကြောင့် ဘေးမှ (တစ်ရှူး)များ၊ သွေးကြောများ၊ အာရုံကြောများအား မထိခိုက်စေရန်၊ မလှုပ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးရသည်။
1. Splints (စပလင့်) ခေါ် သစ်သား၊ ဝါး၊ သံပြား၊ သံချောင်း၊ စာအုပ်၊ ဂျပ်ပြား စသည်။
2. Padding ဂျက်ကက်၊ စောင်၊ သက်ရွက်စသည်။
3. Bandages ပတ်တီး၊ အဝတ်စ၊ စောင်စ။
4. Slings အသိုင်း၊ သုံးထောင့်ပုံပတ်တီး။
သတိထားရန်မှာ ကျောရိုး၊ လည်ပင်းရိုးကျိုးသည်ထင်ပါက နေရာက မရွေ့ရ၊
တင်းကြပ်နေသည့် အဝတ်များ လျှော့ပေးပါ။
လက်ဝတ် လက်စားများ လိုအပ်လျှင် ချွတ်ပေးပါ။
စည်းပေးပြီး ၎င်းနေရာ၏အောက်၌ သွေးစီးဆင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ။
လိုအပ်လျှင် တင်းတင်းစည်းထားသည်ကို လျှော့ပေးပါ။
ထုံ နေ-မနေ မေးပါ။
ပွင့်ထွက်ပြီးကျိုးလျှင် အရိုးကို ပြန်သွင်းဖို့ မကြိုးစားရ။
ခြေထောက်၏ ဘေးနှစ်ဖက်က ကြပ်စည်းပါ။
ကျိုးသည့်နေရာ၏ အထက်နှင့် အောက်အထိ ရောက်ပါစေ။
ငြိမ်အောင် ကျိုးသည့်နေရာ၏ အထက်နှင့်အောက်က စည်းပါ။
အထုံးသည် အနာပေါ် မထားရ။ လိုအပ်လျှင် အသိုင်းလုပ်ပေးပါ။
အဆစ်ကို ဖုံးထားသည့် အိတ်ထဲမှ အရိုးက ထွက်သွားခြင်း။
အဆစ် အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့။
နာမည်၊ ဖိလျှင် နာမည်။
အပြင်က အနာရှိက သန့်ရှင်းဆေး ထည့်ပေးပါ။
အသိုင်း၊ အောက်ခံပြား လုပ်ပေးပါ။
သွေး ထွက်-မထွက် ကြည့်ပါ။
အသက်မရှူပါက (စီ၊ ပီ၊ အာရ်) လုပ်ပါ။
Credit, Dr တင့်ဆွေ
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on Bone injuries အရိုးထိခိုက်ခြင်း ရှေးဦးသူနာပြု
Posted on October 20, 2021 October 20, 2021 by Shangyi
ဇရစ်မြစ်သည် လည်ချောင်းရောဂါအတွက် ဆေးတစ်လက် ဖြစ်သည်ဆိုသည်။
ချက်စားပေးပါက မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ ဦးခေါင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ရောဂါ၊ လည်ကုတ်ရောဂါ၊ စောင်းရွဲ့သော လေရာဂါတို့ကို ဆေးဝါးဓာတ်စာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်ထိုပြင် လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်းနှင့်လည်ချောင်းဆို့သော ရောဂါများကိုလည်း သက်သာစေနိုင်သည်။
ဇရစ်နှင့် ပုဇွန်ခြောက်သုပ် ထိုအသုပ်ကို စားပေးခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းနာသူကို သက်သာစေပါသည်။
ထိုပြင်ဇရစ်ပင်၏ အရွက်နှင့်ရိုးတံကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ နှုတ်မြိန်စေရန် နေရာဒေသအလိုက် အခြားသောဟင်းသီးဟင်းရွက် အသားငါး ပုဇွန်တို့ဖြင့်ရောနှော၍ ချက်ပြုတ်စားလျက်ရှိသည်။
(၂) ထိုဆေးမှုန့်ကို နှမ်းဆီစစ်စစ်ဖြင့် ဖျော်ပြီး ကိုယ်ခန္ခာယားယံခြင်း၊ ဝဲနာရောဂါ၊ ဝဲစိုရောဂါ၊ဝဲခြောက်ရောဂါများကို လိမ်းပေးနိုင်သည်
(စာကိုး။ ဆေးသိပ္ပံအမြင်နှင့် သဘာဝကုထုံးများ)
အမျိုးသမီးတိုင်း အရွယ် (၃) ပါးမရွေး ဖြစ်တတ်တဲ့ မီးယပ်အဖြူ ဆင်းခြင်းအတွက် လွယ်ကူပြီးလက်တွေ့ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလေးအချို့ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အခု ဖော်ပြတဲ့ နည်းလေးတွေကတော့ (၁) ရက် (၂) ရက်စားသုံးရုံနဲ့တော့ မပျောက်ကင်းပါဘူး ဇွဲရှိရှိနဲ့ ရက်ရှည် ၊လရှည် စွဲစားပေးမှ ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းစေမှာပါ ။
ကြက်သွန်နီ ( သို့ ) အဖြူကို ပုဇွန်စို ( သို့ ) ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ရော၍ ဆီသတ်ပြီး ဇရစ်ဖူးကို ထည့်၍ ကြော်ချက်ပါ ( အရသာ မိမိနှစ်သက်သလို ထည့်နိုင်ပါတယ်) ဇရစ်ဖူးကြော်ချက်ကို ထမင်းနဲ့ စားရပါမယ် တစ်ပတ်လျှင် (၄)ကြိမ်ခန့် အရန်ဟင်းအနေနဲ့ နေ့စဉ် စားပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ ဇရစ်ဖူးကို မန်ကျည်းသီးမှည့်နဲ့ ပြုတ်ပြီးတို့စရာ အနေနဲ့လည်း စားပေးနိုင်ပါတယ် လရှည်ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာ လက်တွေ့ပျောက်ကင်းစေပါတယ် ။
အပူ၊ အစပ်များ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ပါ ၊
သောကဖြစ်စရာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချပြီး စိတ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ရွှင်အောင်ထားပါ မိမိ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ ထားပါ ရောဂါပိုးမွှား မဝင်ရောက်စေရန် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ပါ ။
မှတ်ချက် ဒီနည်းလေးတွေကတော့ ကျမနဲ့ မိတ်ဆွေ အစ်မများရဲ့ လက်တွေ့ပျောက် ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလေးတွေပါ ။ ဒီလို ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့ အစ်မ ၊ ညီမများ ဆန္ဒရှိရင် အသုံးပြုကြည့် နိုင်ပါတယ်ရှင်
ပုဇွန် ၁၅ ကျပ်သား
ချဉ်ပေါင် ၁ စည်း (ခြွေထားပါ)
ဇရစ်ရိုး ၁ စည်း (ခြွေထားပါ)
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၁ ဇွန်း
ခရမ်းချဉ်သီး ၁ လုံး (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ငရုတ်သီးစိမ်း ၇/၈ တောင့်
ရေ ၂ ခွက် (နို့ ဆီဗူး)
ပုဇွန်များကို သန့်စင်ပြီး ရေစစ်ထားပါ။ ရေစစ်ထားသည့် ပုဇွန်များကို ဆားနှင့် နနွင်းမှုန့်တို့ ဖြင့် နယ်ထားပါ။
ဒယ်အိုးကို ပူအောင် တည်ပြီး ရေစစ်ထားသည့် ပုဇွန်များကို ထည့်၍ လှော်ပါ။
ပြီးလျင် ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၊ ပါးပါးလှီးထားသော ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ချိုး၍ အိုးထဲ ထည့်ပြီး ရေကို မြုပ်ရုံ ထည့်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် ကြက်သွန်နီ နွမ်းသွားလျင် ခြွေထားသည့် ဇရစ်ရိုး နှင့် ချဉ်ပေါင်ကို ထည့်ပြီး ရေကို မြုပ်ရုံ ထည့်ပါ။
အားလုံးနူး၍ ရေစပ်စပ် ကျန်ချိန်တွင် အပေါ့အငံမြည်း၍ အနေတော်ဖြစ်လျင် မီးဖိုပေါ်မှ ချ၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ဆေးဖက်ဝင်ဇရစ်